Apollonius weTyana aive "chaiye" Kristu here? - Afrikhepri Foundation
Apollonius waTyana ndiye here "chaiye" Kristu?
Kuverenga: 7 mins
A Panguva iyo Kristu weEvhangeri akararama, kwaive nevamwe vazhinji "maChrist" muAsia Minor neMiddle East, zvirinani izvi ndizvo zvinonakidza bhuku, rakaburitswa naRobert Laffont nemunyori weParis, rinoparidza. , Nyanzvi yezvekuEgypt, Jean-Louis Bernard. Iri bhuku, rakanzi: "Apollonius waTyana naJesu", rakavakirwa pabhuku rakakura kwazvo rine zvirevo zvakatsoropodza nezvaJesu, mabasa azvino uno, zvipupuriro zvekare, uye pamusoro pebasa rekutanga, rudzi rwevhangeri nenzira yake: "Hupenyu hwaApollonius weTyana" nemunyori wechiGiriki Philostratus, akaberekerwa muLemnos munenge mugore ra 175 AD. Makore zana mushure mekufa kwake, Philostrate akanyora nyaya yehupenyu hwake pachikumbiro chaJulie, Empress muzivi. Ndiyo chete gwaro rakazara rinogona kuwanikwa pana Apollonius weTyana. Akazvarwa gore rimwe chete kana maviri kutanga kwenguva yechiKristu, muTyana kuvabereki vakapfuma vatengesi vakamupa dzidzo yakasimba, Euthydème aive Tenzi wake wekutanga. Kuzarurirwa kwake kwakanzwika sekuvhunduka, nekuda kwaTenzi wake wechipiri, Euxene. Akaisa maari dzidziso yaPythagoras uye, paive mushure mekudzidzisa kwake apo mudiki Apollonius akasarudza kugara saPythagorean. Rufu rwake runoitika pazera ramakore makumi mapfumbamwe nemasere kana makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Iye anonyangarika pasina kusiya trace, pasina chapupu, izvo zvinowedzera kuwedzera kune chinoshamisa chimiro chehupenyu hwake. Apollonius, aivewo nevadzidzi vake, vaapositori uye aivewo mudzidzi waPythagoras uye mugari wenhaka yezvakavanzika zveEjipitori. Zvinofanira kucherechedzwa kuti panguva iyoyo, izwi rekuti "Kristu" raiwanzoshandiswa: muchiGiriki, "resthrestos" uye "Christos" zvaireva: "akanaka, akazodzwa". Asi izwi iri raive zvakare rakafonerwa kubva kuEgypt hieroglyphic "khery-cheta". "Uyo anotonga zvakavanzika", "anotanga".
Zvino, Apollonius aive mumwe wevatangi ava, mumwe weaikwikwidza naye wechiAramaic Jesu uyo ​​budiriro yedu yechiKristu "yakamubatanidza". Apollonius, muteveri wePythagoras. “Ndiri munhuwo zvangu, asi chero murume anogona, nekufungisisa neuzivi, kusimukira kuna vamwari. »Yakaiswa kumberi, uyu mutongo unopfupikisa uye unoratidza iyo quintessence yeLes Vers d'Or. Hakuna mumwe muzivi, kunze kwaApollonius, akatevera pfungwa dzaPythagorean zvakanyanya kudaro. Apollonius anoratidza zvakajeka dzidziso yeSage yeSamos. Akapfeka mucheka, asingadye chero nyama, anonyorera iye ega mirairo yehupenyu inoita Dzidziso yeFilosofi. Asingagutsikane nekutangisa shanduko yetsika, kugadzirisa zvikanganiso nekushungurudzwa kwevafundisi, Apollonius akabhadhara nemunhu wake nekupa venguva yake mufananidzo chaiwo wehungwaru. Iye anoda kuzvipa iye semuenzaniso kubva kune wese munhu anogona kufemerwa. Pfungwa dzakaburitswa panguva yevaakararama dzakavaratidza zvakanyanya. Munguva yehupenyu hwake, airemekedzwa seakaenzana naMwari, anotyiwa nekuda kwesimba rake rinoshamisa uye anoyemurwa nehunhu hwake hwerupo. Iye anotambudzika kuti achengetedze dzidziso yaPythagorean mukunamata kunopihwa kuna vamwari vekare. Vanhu vazhinji, vaigara vachishuvira kuratidzira, vaiwanzotonga mhando yedzidziso yavo maererano nezvishamiso zvavo. Chinyorwa chezvishamiso zvake ndechekuti kwemakore akati wandei zvaive zvisingaite kupatsanura hunhu hwaApollonius naKristu. Izwi rake rinowanzo pesana neiro raKristu uye hakusi kuwedzeredza kutaura kuti marudzidziso maviri akapesana kuburikidza nehunhu hwavo. Iko kukurudzira kwaApollonius kwaive kusingaperi. Makore mazana mana mushure mekufa kwake, kukudzwa kwakaramba kuchipiwa kwaari. Muchokwadi, Apollonius akazoita mukurumbira zvekuti akadaidzwa, panguva iyoyo, "mushamisi anoita humambo."
Nekudaro, pakangopararira Evhangeri, akakandwa mumimvuri, apo chiAramaiki Kristu chakaunzwa pamberi. Chechi, uyezve, yakaisa simba rayo rose mairi, ichivimba zvisingachinjiki paEvhangeri ina dzatinoziva (dzakanyorwa nguva dzichinonoka); mukuita kudaro, iye nekuzvidira akakanganwa nhamba huru yeapokirifa (isingazivikanwe!) evhangeri, iyo yanga isingaenderane nehupenyu hwaJesu "sekuda kwedu", yakanaka, yakafanana uye inogutsa. Apollonius, muzana ramakore rekutanga renguva yedu, anotaurwa muzvinyorwa zveGreek-Roman. Nei chisingazivikanwe cabal chiri kumudhonzera mukukanganwa, ndozvatinoshamisika nhasi. ChiKristu Chakave Nevatangi Vaviri Here? Ko nyaya dzavo mbiri dzakasangana pasi pezita reimwe? Chero zvazvingaitika, dambudziko rehukama pakati pevatambi vaviri rinotora kukosha kukuru. Annunciation Apollonius akaenderera hupenyu hunoshamisa, achiyambuka metropolises yenguva yake, Roma, Alexandria, Antiyokiya, uye achimanikidza kutsvaga kwake kwehungwaru muEgypt neIndia.
Kwese kwaanoenda, iye anoita zvishamiso izvo zviri chikamu chesainzi yake yesainzi, uye ayo anokwanisa seminana. Iye anorarama hupenyu hwakaoma uye ari musvinwa chete. Anofamba asina shangu, akapfeka mucheka, uye akapfeka bvudzi refu. Parufu rwababa vake, anogovera hupfumi hwake, akaramba mukadzi. Kwemakore mashanu, akaenda kubva kuguta kuenda kuguta, akatongerwa kunyarara. Akazotangazve hupenyu hweruzhinji, achifunga nezvevamwari pamwe nevapristi, aine vadzidzi vanomwe padivi pake. Mukufamba kwake, anotora vashandi vaviri uye stenographer. MuNinevhe, anosangana naDamis, muAsiria uyo achave akatendeka kwaari kusvika parufu rwake. Emperor Domitian, uyo anovenga Apollonius, anomusunga uye anomisa kutongwa kwekubiridzira. Iye anopunyuka, isu tinorasika nzira yake. Anowanikwa pedyo neEfeso kwaakafira akwegura. SaAramaic Christ, anoonekwa "post-mortem" pane dzinoverengeka uye munzvimbo dzinoverengeka, izvo zvinopedzisa mukurumbira wake pakati pevanhu vazhinji. Akakurumbira, zvakare anoremekedzwa, kusvika padanho rekuti Mutsvene John Chrysostom achiri kumutambudza muzana ramakore rechina, achimutevera nemabasa ake uye achimubata, pakati pezvimwe zvinhu, semunyengeri uye muteveri waSatani? Uyu wechiGiriki "Kristu" aifanira kuunzwa pasi nekuda kwezvaakakonzera chikonzero. Zita raApollonius weTyana rakava nesimba rakakura. Apollonius aive, panguva yehupenyu hwake chaihwo, haana kungokudzwa semuchenjeri, asi aityiwa nevamwe sen'anga, ainamatwa nevamwe samwari, kana kuti airemekedzwa semunhu asiri wepanyika. MuChechi yechinyakare mukurumbira wake, pane imwe nguva, wakaita sengozi. Muzana ramakore gumi nemasere, kukakavara kunopesana nechiKristu kunofungidzirwa kuti kunowana muhupenyu hwemunhu uyu mukana wekurwiswa kutenderera. Nhasi mwari anyangarika, muzivi arasikirwa nekusvika kwake, zvese zvasara zvaApollonius weTyana ndiye anoita zvishamiso. Mushure mekuburitswa semuenderera mberi naPythagoras uye anokwikwidza Jesu Kristu.
Iyo Jesu - Apollonius enigma Iyo inyaya isinganzwisisike isinganyanyi kuzivikanwa, nekuti yakavharidzirwa neiyo ingangoita yepasi rose vhezheni yehupenyu hwaJesu, iyo zvisinei isina chokwadi sezvo nhoroondo yezvakaitika isingawanzo uye isina kusimba; asi chero imwe vhezheni inoonekwa sehusimbe. Kubata nenyaya iyi kunoratidzika kwandiri kunge kwakakosha uye hakugone kubvisa chero chinhu kubva kune yakajeka meseji yaJesu. Vanababa veChechi vaigara vachiziva kuti nzira dzaJesu naApollonius weTyana dzakabatana zvakashamisa, uye vamwe vakatya zvekusvika pakuedza kuparadza mukurumbira waApollonius nekumupfuudza nhume yeDhimoni. Apollonius akazvarwa makore mana nguva yechiKristu isati yasvika, asina kunyatso kuva nechokwadi kwemakore mashoma. Izvi ndozvazvakaitawo naJesu. Hapana kana chaicho chinotaura kuti ivo havana kuzvarwa panguva imwe chete. Kufanana neyaJesu, kuzvarwa kwake "kwakaziviswa". Amai vake Penthea vakarota muchiratidzo chemwari Proteus uyo akamuratidza kuti iye pachake aizoita muviri mumwana waaitarisira. Yakanga isiri mubako umo Apollonius akaberekerwa, asi mudanga, umo Penthea akange arara; swans vakaungana vakamukomberedza zvishoma nezvishoma vachirova mapapiro avo makuru, semumhanzi wamwari wakazadza nzvimbo. Paakamuka, mwana anga achangozvarwa, uye mheni yakawira patsoka dzake. Pazera ramakore manomwe, iye akaronzeswa kumudzidzisi; Pane gumi nemana, akaenda kuTaso (kwaakasvika pakuziva Pauro), ndokuzoenda kuAegean kwaakadzidza kuTembere yeAsclepius uko kwakawanikwa chipo chake chekuporesa nekuongorora.
Muzivi, anotora kuzvinyima kwaPythagorean. Iye zvakare akajeka, mage, dhimoni. SaJesu, Apollonius aitaura chiAramaiki, mutauro unoshandiswa muKapadhokiya. Asi akataurawo muchiGiriki chakachena uye chekare. Kana ari Jesu, akagashira rubhabhatidzo munzvimbo tsvene ine mvura ine hunhu hwakafanana neiyo yeJorodhani. Kubatana hakugumiri ipapo; achiri mwana, angangoita makore gumi nemana, vabereki vake vakaenda naye kuTaso, ipapo pedyo nePergamoni, muguta reAegae, kwaive netembere ine mukurumbira yeAesculapius. SaJesu pazera rimwe chete, akataura nevaprisita, avo vakashamiswa nekugona kwake uye huchenjeri hwake. Kubva pamakore gumi nemaviri kusvika makumi matatu evhangeri dzinonyarara pamusoro pehupenyu hwaKristu. Tsika uye zvinyorwa mumutauro wePali zvinoratidza kuti akapedza aya "makore akarasika" kuMabvazuva. Yakanga iri panguva imwe chete iyo Philostrate, munyori wezvehupenyu weApollonius weTyana, akamuita kuti aende kuIndia neHimalaya. Anoyambuka matunhu uko hupenyu hwevanhu hwakabatana zvakanyanya neiyo yevanamwari; nhamba dzinoyera dzinovhenekera, anotora chikamu mumhemberero kurira kwezviridzwa zvisinganzwisisike, anokura muzivo nehungwaru. Zvichida kuti Jesu naApollonius vakabva vasangana muTibet.
Pamakore anosvika makumi matatu ekuberekwa, Jesu naApollonius vanoonekwazve panguva imwe chete muhupenyu hweveruzhinji. Wekutanga anoparadzira dzidziso yake uye anowedzera zvishamiso kwemakore matatu. Apollonius anoita zvakafanana; iyewo akaporesa, akamutsa vakafa uye akatambura kutambudzwa. Evhangeri echinyorwa anotaurira nyaya yekufa kwaJesu pamuchinjikwa, kumutswa kwake nekukwira kwake mushure memazuva makumi mana. Asi kune humwe humbowo hwekuti Jesu akatiza kufa uye akararama kwenguva yakareba zvakadaro. Aya haasi makuhwa asina kujeka, asi tsika inononoka iyo inofanirwa kutariswa. Zvinyorwa zvinovhiringidza zvinomuunza kuhupenyu kuIndia. Aizoramba achikudzwa ipapo, uye guva rake riripo muSrinagar, Kashmir, guva iro mamwe magwaro anoti kuna Apollonius. Wekupedzisira, chokwadi, mushure memakore makumi matatu nematatu akaramba achigara kuGirisi ndokuva zana ramakore, asi hapana chinozivikanwa nezvekupemberera kwake kwekupedzisira uko kungadai kwakamuendesawo kuHimalaya. [Wpdiscuz-feedback id = "Fyv30xnxh33q" mubvunzo = "Unofungei? »Yakavhurwa =» 1 ″] [/ wpdiscuz-feedback]
Apollonius weTyana, muzivi anovandudza wezana ramakore rekutanga CE: kudzidza kwakakomba: kwe ...
4 nyowani kubva ku € 14,60
Tenga € 14,60
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Nyamavhuvhu 3, 2021 6:21 am
Mharidzo yaIsha Kriya kufungisisa (Vhidhiyo)